न्युयोर्कमा दोस्रो नेपाली मेला जुलाई ६ तारिखमा हुँदै :: Press Chautari ::
न्युयोर्कमा दोस्रो नेपाली मेला जुलाई ६ तारिखमा हुँदै
अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपाली कला–संस्कृति, समुदाय र व्यावसायको प्रर्बद्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप आगामी जुलाई ६ तारिखको दिन दोस्रो नेपाली मेलाको आयोजना हुने भएको छ । नेप्लिज अमेरिकन फाउण्डेसनले आयोजना गर्न लागेको उक्त मेला न्युयोर्कको कुईन्सस्थित नेपालीहरुको बाक्लो आवादी भएको ज्याक्सन हाईटस्को ३७ रोडको ७५ स्ट्रिट र ब्रोड–वे बीचमा सम्पन्न हुनेछ । फाउण्डेसनले गत अप्रिल २५ तारिख जारी गरेको प्रेस बिज्ञाप्ती मार्फत कार्यक्रमको बिषयमा जानकारी गराएको हो । कार्यक्रम आइतबारको दिन बिहान ११ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सम्पन्न हुने छ ।
फाउण्डेसनको तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक सोनाम लामाद्धारा हस्ताक्षरित उक्त बिज्ञाप्तीमा कार्यक्रम भव्य रुपमा सफल पार्नको लागि सम्पूर्ण नेपाली समुदायसँग साथ र सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेको छ । कार्यक्रममा बिभिन्न स्टल, प्रर्दशनीका साथै नेपाली मौलिक कला, संस्कृति झल्कने विविध् साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिने आयोजकले बताएको छ । कार्यक्रमलाई ब्यावस्थित र ऐतिहासिक रुपले सफल पार्नको लागि आयोजना मिति भन्दा धेरै समयअघिबाटै कार्यक्रमको तयारी शूरु गरिएको आयोजक मध्येका एक नविन शेरचनले प्रेस चौतारी डटकमलाई बताए । कार्यक्रममा गतसाल भन्दा धेरैले सहभागिता जनाउने अपेक्षा रहेको समेत शेरचनले बताए ।
गतसालको कार्यक्रममा सहभागीहरु
फाउण्डेसनकै आयोजनामा गत बर्ष जुलाई ९ तारिखको दिन ज्याक्सन हाईटस्कै ७३ र ७४ स्ट्रिटको बीचमा बिभिन्न कार्यक्रमबीच भव्य रुपमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाली समुदायका दर्जन भन्दा बढि संघसंस्थाले साँस्कृतिक झाँकी प्रर्दशन गरेका थिए भने डेड दर्जनको संख्यामा बिभिन्न ब्याबसायीका स्टलहरु प्रर्दशनीमा राखिएको थियो । सोहि कार्यक्रममा नेपालका चर्चित एवं ख्यातीप्राप्त दुई दर्जन भन्दा बढि कलाकारहरुले विविध् साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा न्युयोर्क, कनेक्टीकट, पेन्सलभेनिया, भर्जिनिया, न्युजर्सी, बोस्टन र डिसी क्षेत्रका नेपालीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो भने सयौं बंगाली, भारतीय र अमेरिकनहरुले मेलाको अवलोकन गरेका थिए ।
अघिल्लो बर्षको नेपाली मेलामा नृत्य प्रस्तुत गर्दै कलाकार एलिसन लामा
गतसाल आयोजना भएको प्रथम मेलाको बिषयमा पंक्तिकारको नियमित स्तम्भ “समय सन्दर्भ”मा प्रकाशित लेख :
"वाह ! नेपाल, क्यावात नेपाली"
न्यू योर्क राज्यको कुईन्सस्थित–ज्याकसन हाईट्स । अमेरिकामा एउटा मिनी नेपाल । जहाँ हज्जारौ नेपाली र नेपाली भाषीको घनाआवादी छ । यहाँ सानै आकारमा भए पनि नेपाल छ । छातीभरी देश बोकेर यो प्रवास भूमीमा नेपाली तन बाँचेकै छ, नेपाली मन सगरमाथा जस्तै अग्लो भएर उभिएको छ । मनभरी रातो गुराँस फुलाएर शीरमा हिमाल बोक्ने हामी नेपाली हृदयमा बुद्ध टाँसेरै हिडेका छौं ।
हो, यहि मिनी नेपालको एउटा साँगुरो सडकमा हामीले हिजो नेपाल देखायौें । र हामीले सुनायौं नेपाल । सम्पूर्ण त सकेनौं तर एउटा गतिलो अंश प्रस्तुत गर्यो “नेप्लिज अमेरिकन फेस्टिबल”को व्यानर मुन्तिर । जसको केन्द्रमा फर्फराई रहेको थियो हाम्रो देशको झण्डा । त्यहि झण्डाले बाँधेको थियो हिजो सारालाई । सयौं नेपालीले त्यहाँ नेपाल देखाईरहदा र सुनाईरहदा छिमेकीहरु भन्दै थिए –“वाह ! नेपाल, क्याबात् नेपाली” ।
कुरौटेहरुको लागि गाउँको कुनै पूर्णे बजारको मेला बन्यो होला त्यो । जहाँ बकम्फुसे गफको सौदाबाजी मात्र हुन्छ । तर अहँ होइन । हुँदै होइन । त्यो त हामी नेपालीहरुको पहिचान बोकेको एउटा पर्व थियो । उत्सव थियो । साँगुरो गल्ली भएर के भो त हामीले धक् फुकाएर देश देखाउन पायौ । स्वोदेश चिनाउन पायौ । फेरी भन्नेहरुले भन्लान् कति ले हेरे र तेरो देशलाई ? तर यसो होइन, जत्तिले देखे हाम्रो देश उनीहरुले त्यहि भने “वाह ! नेपाल, क्याबात नेपाली” ।
त्यहि पर्वमा हामीले अलिकति पुर्वको माँझ किरात सुनायौ । केहि गण्डक क्षेत्र दुरुस्तै मिसायौ । धेरथोर मञ्जुश्रीले बसाएको बस्तीको विम्व पनि देखायौं । जे जत्ति सुनायौ र देखायौं सबै–सबैमा उहि सिंगो नेपाल बजेको थियो, त्यहि हाम्रो देश उभिएको थियो । यो घनाआवादीमा अभैm पुरा नेपाल देखाउनु छ । छिमेकीलाई सुनाउनुछ । यसपाली त पुरै सूदुर पश्चिम्को देउडा छुट्यो होला । सूदुरपुर्वको च्याब्रुङ् बजेन होला । समग्रमा हिमाल छुट्यो । पहाड छुट्यो । अझ तराई त झनै अधुरै रह्यो । त्यो पनि अर्काे श्रृङ्खलामा छुट्नु हुन्न र छुट्टिनु हुँदैन पनि । किन कि तिनै विम्बहरु देखाएर हामीले लिबर्टी गाढिएकोको भूमीबाट नेपालको चिनारी बाँडनु छ ।
ज्याकसन हाईट्सको साँगुरो गल्लीबाट आरम्भ गरेको यो उत्सवले आगामी बर्षहरुमा फराकिलो सडक ताँक्नु पर्छ । जहाँबाट संसारले हेरुन् हाम्रो देश । विश्वले चिनुन् हाम्रो नेपाल । जसको कुनै पराजयको इतिहास छैन । जो बर्षौैदखि आफैमा स्वतन्त्र छ । सार्वभौम छ । अनि इतिहास साक्षी छ–“हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौ ।”
अर्काे साल हामीले यहि उत्सव राष्ट्र संघको आँगनमा फेरी नेपाल देखाउँदै र सुनाउँदै बैरीहरुले बोल्दै आएको गलत तथ्यहरुलाई नामेट गर्न सकौं । छिमेकीहरुले हाम्रो सगरमाथा र बुद्ध उताको भन्दै गर्दा सत्य इतिहासको विम्व ठड्याएर संसारलाई भन्न सकौं –“सगरमाथा र बुद्ध हाम्रो हो । केवल हाम्रो । ” त्यहि बेला बोल्नेहरुले ठूलो स्वरमा खस्रो पीठो बिकाउँदै आए पनि हाम्रो सक्कली चामल बिक्ने छ । अनि विश्वले भन्नेछ–“त्यो अग्लो चुचुरो नेपालको हो अनि भगवान बुद्ध पनि तिनकै भूमीपुत्र हुन् । हो त्यत्ति बेला पनि हाम्रा छिमेकीहरुले भन्नेछन्– “वाह ! नेपाल, क्याबात नेपाली ।”
आइतवार, २०७१ बैशाख १३ गते ०६:४७ / Sunday, Apr 27, 2014 6:47 am